Ipesente zithetha "nge-100" okanye "kwikhulu ngalinye." Ngamanye amagama, ipesenti lixabiso lihlukaniswe ngama-100 okanye u-100 ukuya kwi-100. Kukho ukusetyenziswa kwezinto zangempela zokuphila ekufumaneni ipesenteji. Abameli bezindlu, abathengisi bemoto, nabameli bemveliso yokuthengisa iimveliso bafumana iikomishoni eziyinxalenye yeentengiso. Ngokomzekelo, i-agent ye-estate ingayifumana inxalenye yentengo yokuthengisa yendlu eyanceda ukuthengwa komthengi okanye ukuthengisa.
Umthengisi wemoto ufumana inxalenye yentengo yokuthengisa yemoto ayithengisayo. Ukusebenza kweengxaki zeepesenti zobomi kunokukunceda uqonde ngakumbi inkqubo.
UNoel, i-agent ye-real estate, injongo yokufumana ubuncinane i-$ 150,000 kulo nyaka. Ufumana ikhomishini yesithathu ekhulwini kuyo yonke into ayithengisayo. Ingakanani inani leedola yeendleko azithengisayo ukuze afinyelele injongo yakhe?
Qalisa ingxaki ngokuchaza oko uyaziyo noko ufuna ukuzimisela:
UNoel uzakufumana i-$ 3 ngeyonke imali eyi-100 kwiirhwebo.
Uya kufumana i-$ 150,000 nganye (yintoni ixabiso lemali) ekuthengiseni?
Bhengeza ingxaki ngolu hlobo lulandelayo, apho "imela khona ukuthengisa ngokuthe ngqo:
Ukuyicombulula ingxaki, phinda unyuke. Okokuqala, bhala amaqhekeza ngokuzenzekelayo. Thatha i-numator yokuqala yenombolo (inombolo ephezulu) kwaye uyiphindise ngeqhekeza lesibini (inombolo engezantsi). Emva koko thabatha inombolo yesibini yenxalenye uze uyiphindise ngeqhekeza lokuqala, njengolu hlobo:
Ukwahlula amacandelo omabini alinganayo ngo-3 ukulungiselela isisombululo kwi:
Ngoko, ukwenza i-$ 150,000 kwikhomishini yonyaka, uNoel kwakufuneka athengise izindlu ezizigidi ezingama-5 ezigidi.
U-Ericka, elinye i-agent agent, ekhethekileyo kwiindawo zokuqeshisa.
Ikhomishini yakhe ingama-150 ekhulwini kwerhafu yenyanga. Kwiveki eledlule, wathola i-$ 850 yee-dolophu ekuthunyelweni kwindlu eyayikunceda umxhasi wakhe ukuba aqeshise. Ingakanani irenti yenyanga?
Qala ngokuchaza into oyaziyo kunye nento ofuna ukuyifumana:
I-150 engamaRandi ayi-100 yenkokhelo yenyanga nganye ihlawulwa ngu-Ericka njengothumo.
U-850 $ ngamnye (yimalini) yerenti yenyanga ehlawulwa ngu-Ericka njengothumo?
Bhengeza ingxaki ngolu hlobo lulandelayo, apho "r" imele irente yenyanga:
Ngoku uya kudlula:
Ukwahlula amacandelo omabini e-equation ngama-150 ukuze asombulule i-r:
Ngoko, isaphulelo senyanga (ukuze uJessica athole i-$ 850 kwikhomishini) ngu-$ 556.67.
UPetros, umthengisi wezobugcisa, ufumana ikhomishini engama-25 ekhulwini lobugcisa obuthengisa. UPerre wathola i-$ 10,800 kule nyanga. Yayiyiphi inani lexabiso leedola lezobugcisa ayithengisayo?
I $ 25 ngeyonke i-$ 100 yempahla yokuthengisa yobugcisa i-Pierre ihlawulwa kuye njengekhomishini.
I $ 10,800 nganye (yimalini yexabiso ledoli) yokuthengiswa kobugcisa bePeti ihlawulwa kuye njengothumo?
Bhala le ngxaki ngolu hlobo lulandelayo, apho "imela khona ukuthengisa:
Okokuqala, phinda uzande
Ukwahlula amacandelo omabini e-equation ngo-25 ukusombulula:
Ngaloo ndlela, ixabiso leyonke idola yezobugcisa othengiswa nguPeter yi-$ 43,200.
I-Alexandria, umthengisi kwi-car dealership, ufumana ikhomishini engama-40 yemali yokuthengisa izithuthi. Kunyaka ophelileyo, ukuthunyelwa kwakhe kwakuyi $ 480,000. Yayingakanani inani leedola lemali yokuthengisa yalo nyaka odlulileyo?
Chaza oko uyaziyo kunye nento ofuna ukuyiqonda:
I-$ 40 ngeyonke i-$ 100 yemoto yokuthengisa ihlawulwa ku-Ericka njengekhomishini.
Amawaka angama-480,000 ngeyonke (ixabiso lemali lika-dollar) yemali yokuthengisa ihlawulwa ku-Ericka njengekhomishini?
Bhala le ngxaki ngolu hlobo lulandelayo, apho "imela imoto yokuthengisa:
Emva koko, phinda uzande
Ukwahlula amacala omabini alinganayo ngama-40 ukulungisa ingxaki.
Ngako ke, inani lemali le-dollar ye-Alexandria imoto yokuthengisa ngonyaka odlulileyo yayingu-$ 1.2 yezigidi.
I-Agent ukuya kuThengisi
UHenry ungummeli wabakhenkethi. Ufumana iipesenti ezili-10 zomvuzo wabaxumi. Ukuba wenza i $ 72,000 ngonyaka odlulileyo, ngaba bathengi bakhe bangakanani?
Chaza oko uyaziyo, kunye nento ofuna ukuyiqonda:
I-10 yezigidi zeeRandi ezili-100 zemirhumo yezivakalisi zihlawulwa ku-Henry njengekhomishini.
Ii-72,000 zama-dollar nganye (yimalini yexabiso leedola) yabemivuzo yabavakalisi ihlawulwa kuHenry njengekhomishini?
Bhala le ngxaki ngolu hlobo lulandelayo, apho "imele imivuzo:
Emva koko, hamba ngokuphindaphinda:
Ukwahlula amacala omabini e-equation ngo-10 ukulungiselela isisombululo:
Ewonke, abathengi bakaHenry benza i-$ 720,000 ngonyaka odlulileyo.
I-Pharmacy Sales Rep
U-Alejandro, ummeli wokuthengisa iimveliso, uthengisa iimpawu zomenzi weziyobisi. Ufumana ikhomishini ye-12 yeepesenti yeentengiso ezithengiswayo kwiimpawu ezizithengisayo kwizibhedlele. Ukuba wathola i-$ 60,000 kwiikomishoni, yayiyiphi inani lexabiso lemali elalithengisayo?
I-$ 12 ngeyonke imali eyi-100 yexabiso leziyobisi ihlawulwa ku-Alejandro njengekhomishini.
I-60,000 yeeyure nganye (yiyiphi ixabiso lentela) leziyobisi ihlawulwa ku-Alejandro njengekhomishini?
Bhala le ngxaki ngolu hlobo, apho "d" ibhekisela kwixabiso lentela:
Ukwahlula amacala omabini e-equation ngo-12 ukucombulula i-d:
Inani elipheleleyo lamaxabiso edoli yezilwanyana ezazithengiswa ngu-Alejandro kwakuyi-$ 500,000.
Yintoni Okumele Uyazi NgeMathematika yoBuchule
Isimo somtshato kunye noNcedo lwezeMali
Top 15 Frank Sinatra Iingoma
Ngo-2013 iWWE PPV Iziphumo kunye nokuFumana
Isikhokelo sembali kunye nesimboli se-Muay Thai
Ngaba Ukubhala KwamaJapan Kufuneka Kube Nokulinganisela Okanye Kukho?